တခြို့လူတှကေ ကိုယျ ယုံကွညျရလောကျတဲ့အထိ မထိုကျတနျကွဘူး – Shinyoon
တခြို့လူတှကေ ကိုယျ ယုံကွညျရလောကျတဲ့အထိ မထိုကျတနျကွဘူး
တဈယောကျယောကျ နောကျကြောကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့အခါ နာကငျြရတာထကျ အဲ့ထိုးတဲ့လကျက ကိုယျ အယုံကွညျဆုံးလူတဈယောကျ ဖွဈနမှောကို ပိုပွီးကွောကျတာပါ ။ ဖကျပွီးထိုးတဲ့ဓားတှကေ အပွငျကလှမျးပွီးထိုးတဲ့ ဓားတှထေကျ ပိုပွီးနကျတတျတဲ့ သဘောမှာရှိတယျ ။
ယုံကွညျမှုတဲ့ စကားလုံးလေးတဈလုံးတညျးပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ တညျဆောကျယူဖို့ကတြော့ အခြိနျတှေ နှဈနှဈလလ ကွာတတျတယျ ပွိုပကျြသှားဖို့ကတြော့ စကားလေးတဈခှနျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ လုပျရပျလေးတဈခုကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ အခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာ ပကျြစီးသှားတတျတယျလေ ။ ခကျတာက အဲ့ဒီယုံကွညျမှုကို အလှဲသုံးစား လုပျသှားကွတာပဲ ခကျတာပါ ။
ကိုယျ လူတဈယောကျကို ယုံကွညျဖို့ခကျတယျ ။ ယုံမိပွနျရငျလဲ အရာရာကို ယုံကွညျမိသှားတဲ့အထိ ဖွဈတတျတဲ့စိတျကလဲ ခကျတာပါ ။ ကိုယျကပဲ ကံမကောငျးဘူးလို့ထငျပါတယျ အဲ့လိုယုံကွညျမိတာနဲ့ တဈဆကျတညျး အနောကျမှာ သစ်စာဖောကျခံရတာပါပဲ ။
ရနျသူတှကေိုလဲ မကွောကျဘူး ကိုယျ့ကို မုနျးတဲ့သူတှကေိုလဲ မကွောကျဘူး သခြောပွနျတှေးကွညျ့တဲ့အခါ ကိုယျရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှမှော ဘယျအနာကမှ ကိုယျ့ရနျသူ တှေ ကိုယျ့ကို မုနျးတဲ့သူတှေ ပေးခဲ့တာတှေ မပါဘူးလေ ။ ကိုယျ့ကို ခဈြလှပါခညျြရဲ့လို့ပွောတဲ့လူတှကွေောငျ့ ကိုယျ့မှာ မကွာခဏနာကငျြခဲ့ရဖူးပါတယျ ။
မငျးကို မကနြေပျဘူး ဆိုပွီး ရှတေ့ညျ့တညျ့ ခုတျတဲ့ဓားတှကေ ရှောငျခြိနျရသေးတယျ ကိုယျညံ့မှ ကိုယျခံရမှာလေ ။ ငါမငျးကို ခငျလို့ပါ ဆိုပွီး ကိုယျ့အနားမှာ ရပျနလေူတှေ ထိုးတဲ့ဓားက ရှောငျခြိနျရဖို့မပွောနဲ့ နောကျဆုံး ဓားလာစိုကျမှာ ကိုယျ့မှာ နငျ့ကနဲ့ နာရတာလေ ဒါတောငျ ကိုယျ့မှာ နောကျမလှညျ့ကွညျ့ရဲဘူး အဲ့ဒီ ဓားကို ကိုငျထားတဲ့လကျတဈစုံက ကိုယျ အယုံကွညျရဆုံးသူ ဖွဈနမှော စိုးတယျလေ ။
တကယျပါ . . .တခြို့တှကေ ကိုယျယုံကွညျရလောကျတဲ့ထိ မထိုကျတနျကွဘူး ။ တကယျပါ . . .တခြို့တှကေ သိပျကို ဟနျဆောငျကောငျးကွတာ တဈဖကျမှာ မုနျးလို့မုနျးနမှေနျးမသိအောငျကို ဟနျဆောငျကောငျးကွတာ ။ ကိုယျညံ့လို့ကိုယျခံရတယျလို့ပွောရအောငျလဲ သူ့ကို ကိုယျလိုပဲ ထငျခဲ့မိတာကိုပဲ ကိုယျ့ကိုယျကို အပွဈတငျပါတယျ ။
တကယျပါ …. တခြို့လူတှကေ ကိုယျ ယုံကွညျရလောကျတဲ့အထိ မထိုကျတနျကွဘူး ။
တစ်ယောက်ယောက် နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့အခါ နာကျင်ရတာထက် အဲ့ထိုးတဲ့လက်က ကိုယ် အယုံကြည်ဆုံးလူတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို ပိုပြီးကြောက်တာပါ ။ ဖက်ပြီးထိုးတဲ့ဓားတွေက အပြင်ကလှမ်းပြီးထိုးတဲ့ ဓားတွေထက် ပိုပြီးနက်တတ်တဲ့ သဘောမှာရှိတယ် ။
ယုံကြည်မှုတဲ့ စကားလုံးလေးတစ်လုံးတည်းပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် တည်ဆောက်ယူဖို့ကျတော့ အချိန်တွေ နှစ်နှစ်လလ ကြာတတ်တယ် ပြိုပျက်သွားဖို့ကျတော့ စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရပ်လေးတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ပျက်စီးသွားတတ်တယ်လေ ။ ခက်တာက အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်သွားကြတာပဲ ခက်တာပါ ။
ကိုယ် လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ဖို့ခက်တယ် ။ ယုံမိပြန်ရင်လဲ အရာရာကို ယုံကြည်မိသွားတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကလဲ ခက်တာပါ ။ ကိုယ်ကပဲ ကံမကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ် အဲ့လိုယုံကြည်မိတာနဲ့ တစ်ဆက်တည်း အနောက်မှာ သစ္စာဖောက်ခံရတာပါပဲ ။
ရန်သူတွေကိုလဲ မကြောက်ဘူး ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့သူတွေကိုလဲ မကြောက်ဘူး သေချာပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေမှာ ဘယ်အနာကမှ ကိုယ့်ရန်သူ တွေ ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့သူတွေ ပေးခဲ့တာတွေ မပါဘူးလေ ။ ကိုယ့်ကို ချစ်လှပါချည်ရဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေကြောင့် ကိုယ့်မှာ မကြာခဏနာကျင်ခဲ့ရဖူးပါတယ် ။
မင်းကို မကျေနပ်ဘူး ဆိုပြီး ရှေ့တည့်တည့် ခုတ်တဲ့ဓားတွေက ရှောင်ချိန်ရသေးတယ် ကိုယ်ညံ့မှ ကိုယ်ခံရမှာလေ ။ ငါမင်းကို ခင်လို့ပါ ဆိုပြီး ကိုယ့်အနားမှာ ရပ်နေလူတွေ ထိုးတဲ့ဓားက ရှောင်ချိန်ရဖို့မပြောနဲ့ နောက်ဆုံး ဓားလာစိုက်မှာ ကိုယ့်မှာ နင့်ကနဲ့ နာရတာလေ ဒါတောင် ကိုယ့်မှာ နောက်မလှည့်ကြည့်ရဲဘူး အဲ့ဒီ ဓားကို ကိုင်ထားတဲ့လက်တစ်စုံက ကိုယ် အယုံကြည်ရဆုံးသူ ဖြစ်နေမှာ စိုးတယ်လေ ။
တကယ်ပါ . . .တချို့တွေက ကိုယ်ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ထိ မထိုက်တန်ကြဘူး ။ တကယ်ပါ . . .တချို့တွေက သိပ်ကို ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတာ တစ်ဖက်မှာ မုန်းလို့မုန်းနေမှန်းမသိအောင်ကို ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတာ ။ ကိုယ်ညံ့လို့ကိုယ်ခံရတယ်လို့ပြောရအောင်လဲ သူ့ကို ကိုယ်လိုပဲ ထင်ခဲ့မိတာကိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ပါတယ် ။
တကယ်ပါ …. တချို့လူတွေက ကိုယ် ယုံကြည်ရလောက်တဲ့အထိ မထိုက်တန်ကြဘူး ။